CloudCraze: Iyo Ecommerce Platform Yakavakirwa Salesforce | Martech Zone
Maitiro akakosha atinoona izvozvi pawebhu ndiko kuiswa kweB2B neB2B2C kuburikidza ne e-commerce. Kunyangwe kana kambani yako iine timu yekutengesa, maitiro ekutaurirana, chirongwa chekugadzira, uye invoice zvese zvinofamba online. Idzi nzira dzinoshandiswa kubatanidza kune akawanda masisitimu, zvinoda zvemanyorerwo kupindira, uye zviri nyore hazvigone kugadziriswa neyakajairwa ecommerce chikuva. Izvo zviri kuchinja nekukurumidza uye kambani yakaputika mukuzivikanwa iri CloudCraze.
CloudCraze ndiyo yekutanga uye chete yakaratidza Enterprise eCommerce Platform yakagadzirwa natively paSalesforce Platform. Inopa kuvimbika uye kusagadzikana kweSalesforce kune B2B eCommerce software nepo ichigovana dhata uye maitiro neazviripo Salesforce CRM deployments.
CloudCraze inoshandisa B2B yekambani iripo data yevatengi kubva kune yayo Salesforce account uye inosanganisa iyo neCommerce chikuva sisitimu. CloudCraze inoshanda mukuita kune iyo Salesforce data yevatengi pamwe nedata rayo rakadzidza kuti ishandire zvirinani vatengi ava nenzira kwayo. Iyo kambani inozivikanwa mu Forrester Wave ™: B2B Commerce Suites, Q2 2015 uye yatove kushandira Fortune 500 makambani, akadai seCoca-Cola naBarry Callebaut.
CloudCraze Zvimiro Sanganisira
Tenga Kwese, chero nguva, pane Chero Chigadzirwa - Chiitiko cheMushandisi chinoshandura otomatiki pane chero nhare mbozha ine Dhizaini Dhizaini
Tsvaga uye Tarisa Zvigadzirwa - Tsvaga zvigadzirwa nemazita echigadzirwa, SKU kana tsananguro yechigadzirwa, hunhu hwechigadzirwa
Product Details - Wona chigadzirwa ruzivo kusanganisira chigadzirwa zita, mutengo, chiyero, wongororo, chigadzirwa maficha, zvakadzama chigadzirwa tsananguro, kuwanikwa, ratings, ongororo, zvimwe zvigadzirwa, uye zvigadzirwa zvigadzirwa
Chigadzirwa Kukwidziridzwa - Coupons, zvine hukama zvigadzirwa uye kushambadza zviripo mukati mese.
mungoro yekutengera - yakazara-inoratidzwa ngoro ine zvishuwo-zvinyorwa, makotesheni, mitero yakaverengerwa, kutumira, kutarisa kwemaonero, maopitoni ekubhadhara, kusimbiswa, uye email.
Account Management - Yekuodha nhoroondo uye account manejimendi nekutadza kubhadhara uye kutumira kero
Internationalization - mari yemuno uye rutsigiro rwemitauro yakawanda. Tsigiro yemari dzese zana negumi nematanhatu nemitauro yese makumi matanhatu nenomwe inotsigirwa neSalesforce
Yakapiswa Zvitoro zveSitolo - Manage uye gadzirisa akawanda akasiyana ezvitoro.
Analytics - yakavakwa mukati analytics uye kuzivisa mashandiro ayo anotendera iwe kutora uye kufumura yakakodzera data kuGoogle Analytics kukwidziridza ruzivo iwe rwaunogamuchira.
Kumbira Branded CloudCraze Demo
Shandisa masafura epamberi nekukurumidza, gadzira mari yepamhepo mumavhiki, uye nyore kukwira kukura.
Tags: B2B Commerce Suitesbarry callebautcloudcrazecoca-colaecommerceforrester wavesaleforcevatengesi ecommercemutengesi mumwe
Ndira 20, 2016 na11: 20 PM
Kutaurwa kweCoca-Cola semushandisi kunondiudza here kuti ichi chigadzirwa chinopfuura kugona nekukwanisika kwemabhizimusi "madiki" chaiwo?
Ndira 22, 2016 na3: 14 PM
Mikana ndeyekuti kana iwe uri kushandisa Salesforce seCentral CRM yevatengi vako kuti iwe unogona kunge uine vateereri vakawanda. Scalesforce zviyero kubva kudiki kuenda kubhizinesi, saka fungidziro yangu ndeyekuti iwe unenge uchizove wepakati-kusvika-muhombe saizi bhizinesi usati waita yetsika e-commerce chikuva chayo.